Kid ngokuvamile ukuphazanyiswa ngesikhathi ikilasi, osemusha encishisiwe ukusebenza nesobrannosti ngenxa eklasini, futhi omdala akhohlwe njalo lapho ngafaka elawulwa kude noma okhiye ... Inkinga konke kuhlobene ukunganakwa, engesiyo inqubo engqondweni yethu, kodwa ukuhlela ukusebenza kwawo . Isexwayiso - isimo ukwazi elikuvumela ukuba ngokunembile futhi ngokugcwele ezibonisa ngokoqobo. Ngingayithola kanjani mayilalele kakhudlwana futhi ukuthi lokhu kudinga?
ithuluzi abahlukile ukugxila into noma othile enezinto eziningi izakhiwo ukuthi lingathuthukiswa. Ukunakwa libhekene:
ivolumu - nenani izifundo waqonda kanyekanye kukhishwa nezingxenyana ezithile ngomzuzwana (ngokuvamile 4 kuya ku-6);
ukuzinza - nokugcinwa ubude;
okuhlushwa (ukucaciseleka okuqonda), okwenza akazange athikanyezwe amasignali zincane;
switchable - ngesilinganiso yenguquko ukusuka omunye komunye, into ebaluleke kakhudlwana;
ukusatshalaliswa - ikhono zifana izinqubo;
ngamakhasimende (umnqopho) - Ukuqhela kwezinye amasignali njengoba ngaphakathi ezinkulu noma ngaphandle.
Indlela usizo ingane yakho mayilalele: izincomo wezifo
Udinga kubhekwane impumelelo yesikhathi esizayo ukuqeqeshwa nge preschooler, beqeqesha hhayi izinqubo engqondweni yethu kuphela (inkumbulo, ukucabanga, umcabango), kodwa futhi ukunakwa. Isikhathi preconscious ingane isimo, ngakho udinga ukudala umsebenzi ezimweni ezithile:
induduzo ezihambisana ecabanga ngokugcinwa umbuso kosuku, ukuntuleka isidingo Ukugcwaliseka kwezinye izidingo, lithathelwe ezakhiweni;
umfutho ngokomzwelo obonisa nge ushintsho imisebenzi ihehe umntwana;
futhi isinyathelo ecacile by step imiyalelo embikweni wesimo ithoni esinomusa, ngoba uhlela futhi ithuthukisa ukuhlela komntwana esizayo;
usizo ekubhekaneni iziphazamiso ngesimo isiqondiso ngamazwi: "Sizokwenza ukuqedela umsebenzi wokuqala, bese ukudlala umshini";
Ukudala isimo sendawo kudingekile, ungakwazi uqhubekele izivivinyo, ngokuxazulula inkinga nendlela yokuba seduze.
Bonisa ingane yakho
Lo mdlalo "amaphuzu amathathu" ethile kuye ngokuthi singakanani ukunakwa
Ingane, Kufakwe isikhundla ukhululekile, esenikezwa imisebenzi emithathu. Iziqondiso ahlelwe ngesikhathi esifanayo. Inhloso: Ukuze enze zonke izinyathelo ngendlela efanele futhi ngokulandelana. Ngenxa yalesi asinikezwayo ithimba kumnandi: ". Nelinye futhi ezintathu, sigijime" inkomba Isibonelo 1. Kathathu ukushaya izandla. 2. Shayela incwadi zamagama yesibili. 3. Thatha ezandleni ithoyizi esithambile.
Uma uphumelele, emsebenzini kungenza izinkinga: 1. Shaya tandla ngakho izikhathi eziningi, ukuthi mingaki iminyaka uke waphenduka. 2. Bhala ephepheni esiqukethwe izincwadi ezintathu lokuqala lwezinhlamvu zamagama. 3. Thatha into ogama lakhe iqala ngohlamvu "c".
Lo mdlalo "Izimpawu" ku refocusing
Lokhu fun is arcade kwenziwa neqembu, kodwa unga nengane eyodwa. Uba kanjani ukunakekelwa kwengane lapho akazi ukuthi ukuzulazula imvelo? Lokhu kusiza izimpawu ukushintsha, kusungulwe abadala ngokuhamba yimuphi umdlalo: amagama "Yeka umdlalo," ukushaya i-alamu noma insimbi, ukucinga indikimba yendaba, wabonisa kubahlanganyeli.
Lo mdlalo "Ubufakazi" ku ukusatshalaliswa ukunakwa
Isifundo for the senior ingane zasenkulisa owazi izincwadi. Asinikezwayo umbhalo umbhalo omkhulu, lapho une ukuthola niwele zonke izincwadi "O". Uma ngesikhathi umdlalo ingane ikwenze nomaphi, kufanele ilungiswe. komsebenzi eyinkimbinkimbi: 1 strikeout bese uthalela incwadi eyodwa kuya kwenye. 2. Qalisa lowo msebenzi ngesikhathi. 3. Hlela ukuncintisana enye ingane noma nomuntu omdala. Ngamabomu ulahlekile izinhlamvu ukuphathisa umsebenzi ukuhlola kokubili isitha sakho.
Uba kanjani osemusha eyinakekela
Lo mfana akwazi ukwenza okwengeziwe imisebenzi eyinkimbinkimbi, okwandisa inani ukunakwa. Yena banganikeza ipuleti lapho izibalo ehlukahlukene Jomethri athwale amadijithi, isibonelo, 8, 3, 9. Umumo kungaba yimiphi calantsatfu, sikwele, indilinga. Ngaphambi amaphilisi ukuboniswa kufanele waxwayisa ngokuthi isibalo kuzovezwa. Ukukhulisa kwabo yesibili, ungakwazi ukunikeza ukubhala izinombolo zilandelana, ukuthola isamba, umkhiqizo. Khona-ke wacela ukuba igama izibalo ngaphakathi which they okuvezwayo. Esifundweni esilandelayo inombolo kwamadijithi futhi amalebula kumele lenyuke uma umfundi ukuba babhekane kalula umsebenzi.
Inkinga ezithakazelisayo zezibalo ukushintshela ukunakwa kuyimfuneko ukurekhoda izinombolo ezimbili ikholomu. Laba bobabili elilandelayo kwamadijithi kuyoba: phezulu - kusukela isamba amayunithi ezimbili zokuqala, futhi phansi - phezulu nje Kuhanjiswe. Ngokwesibonelo, kuthathwe 3 futhi 5. Ngenhla 8 kuthanda, ezansi - 3. Kumiswa pair olandelayo kwamadijithi is ngesisekelo efanayo. Jikela 1 kanye 8. nozungu itholakala lokuthi iqembu unikezwa umsebenzi omusha, lapho inani amayunithi zilotshiwe ezansi, futhi nenombolo ngezansi idluliswe phezulu. Ngemva kokwazi kahle entsha party umsebenzi kuyakhuthazwa ukushintsha kunezinxushunxushu yabo isiginali ethize.
Ngaphandle ubuchwepheshe besimanje kunzima kakhulu ukuchaza nokuthuthukisa isici focus, njengoba emakamu. Ikhompyutha Isiqophi Game Google ukunakwa nge imikhono ekhethekile, okuyinto inzwa okuhlangene kuthola degree of okuhlushwa ezingeni yokucabanga. Lo mdlalo senziwa ngesisekelo indlela we zezinkanyezi American.
Inani elikhulu of isofthiwe nezidingo nendlela yokuba seduze. Ngaphezu umdlalo ukwakha eziyinkimbinkimbi umzimba sokuthuthukiswa sezindawo eziyisisekelo ukunakwa. "Supervnimanie" - omunye wabo, okubandakanya amasethi nanye imisebenzi: "Sesha", "Buyisela" "Hlunga" "Iphutha" "Sum", "Ukulungiswa", "Troika", "Breath", "isibalo" "Checker", "Rhythm". Lezi izakhiwo ayatholakala kuyi-Internet, zisekelwe isithakazelo izingane zesikole.
Emadolobheni amakhulu zikhona izikhungo ngokwengqondo, eqhuba ukuqeqeshwa iqembu ngoba intsha esikhulile futhi abadala ezihlukahlukene. Ezinye ethandwa kakhulu - ukuthuthukisa inkumbulo nokucabanga nisebenzise iso lengqondo. Ngo parallel, le nkinga kanjani ukuze ube umuntu ocabangelayo, ngoba kusekelwe bezibona, observation, ukugxilisa ingqondo. Izivivinyo zisekelwe izakhiwo eziyisisekelo ukunakwa, ukuthuthukisa kanye nokuzithuthukisa. A lonke isayensi eydetika - amathuluzi ukusebenza yisiphi isamba ulwazi abantu bobudala obungefani.
Kukhona indlela ukuthuthukisa ingqondo ngakwesokudla (Petersburg), inkambo "supermemory" ngesisekelo sikaMongameli School (eMoscow), besebenzisa imibono nemikhuba Dzhona Etkinsona. Ukuze kudlule ukuqeqeshwa udinga ugqozi, esekelwe izinkinga ezikhona, noma lapho sisebenzelana ulwazi, noma ekuphileni kwansuku zonke.
Izimpendulo ezivela ababambiqhaza ezinhlelweni ukuthuthukisa ukunakwa
E Warsaw, kwake ukuthengiswa kwezincwadi ezazisele ezokuthutha izinto abamfunanga iminyaka. On ke bahlangana abagibeli abaningi nongacabangeli, enethemba ukusihlenga izikhwama intandokazi yakho, nezigqoko, amagilavu. Omunye wabo empeleni wathola futhi wathenga isambulela yayo yangaphambili, ngosuku olufanayo, futhi ukuyishiya e ibhasi. Kukhona kungukuphula emakamu nokusatshalaliswa ukunakwa. Uba kanjani eduze ekuphileni kwansuku zonke, yini indlela ukulingana laba bantu kakhulu? Izimpendulo ezivela ababambiqhaza ezinhlelweni zokuqeqesha ukukhombisa ukuthi bayakwazi ukusunduza kwemingcele ajwayelekile. Indoda ezinikezwa ezinhlanu izitolo iminyaka eminingi, lokho asikwazanga ukufunda ngaphambili. Ukunganeliseki ukukhathazeka abaqeqeshi ezithile kuphela, izinga lokuphila kwabo umsebenzi nokwakha inkhulumomphendvulwano abahlanganyeli.
Kukhona amakilasi esikhethekile izingane zasenkulisa nabafundi esikoleni sabaqalayo. Abazali bazo futhi bayakwazisa high quality. Umbandela main - okuthuthukisa ukusebenza yengane zezemfundo, ngcono amakhono, ukusiza ukuthola ngempumelelo ulwazi bebodwa. Izibuyekezo Good izinhlelo computer ukuthi ukunikeza usizo wangempela izingane zesikole. Ngesikhathi esifanayo, umbuzo ukuthi babe seduze ekuphileni, abaningi bayavuma ukuthi ilungelo ukuhlela amakilasi njalo izingane esikhathini zasenkulisa edalwe nsuku ukwanele esizikalayo ukuthuthukiswa focus empilweni kamuva.